MY REMEMBRANCE: ကဲ ဘာရွေးမလဲ သင့်သဘောပါ
Posted by puluque at Friday, January 16, 2009
ဟဟ.. ကောင်လေးမြန်မာပြည်ပြန်ခါနီး ကပ်ကြွားသွား
သေးတယ်။ မယူချင်ဘူးဆိုပေမယ့် အိမ်ရောက်မှ မာမီ
က အခန်းပိတ်ပြီး မိန်းမပေးစားနေဦးမယ်နော်.. ဟတ်
မောင်လေးပုလုကွေး ချစ်တဲ့သူနဲ့ ပေါင်းဖော်လက်တွဲနိုင်
ဒီပုံစံအတိုင်း ဆက်သွားရင်တော့ :P :P
မောင်ရင်လေးက ဘယ်ကားကို ရွေးမှာလဲကွယ်။
ဘယ်ကား ရွေးရမှန်း မဝေခွဲနိုင်ရင် တစ်ခုတော့ အကြံပေးမယ်။
လူလည်း ရှိန်တယ်။ အကြမ်းလည်း ခံတယ်။ ဆေးလာခြစ်မှာကိုလည်း မပူရဘူး။
သံချပ်ကာ အမြောက်ကားတာ ရွေးလိုက်ပါတော့ကွယ်။ တကယ်ပြောတာပါ။
ဟုတ်တယ် ဂျုလိုင်ပြောသလိုသံချပ်ကာ ကားရွေး
အိမ်ထောင်ပြုတယ်ဆိုတာ ဈေးကွက်မှာတင်ရောင်းဖို့မဟုတ်သလို အခုခေတ်မှာမိန်းမတွေဆိုတာ ရောင်းကုန်မဟုတ်တော့ဘူး ဆိုတာ အဲဒီတရုပ်မသိဘူးထင်တယ်
နားလည်မှူ ကြင်နာမှူ ဟာ အရေးကြီးပါတယ်
အိမ်ထောင် တစ်ခု အတွက် အချစ်၊ မေတ္တာ၊ နားလည် မှုတွေအပြင် သစ္စာ ဆိုတဲ့ တစ်ခုကိုလည်း မပျက်ဖို့ လိုမယ်ထင်တယ်ဗျာ.. ဒါမှလည်း အိမ်ထောင် တစ်ခု တည်မြဲမယ် မဟုတ်လား..?
အပေါ်က စာတွေက ပုလုကွေးရေးပေမဲ့ ပုလုကွေးရဲ့ အယူအဆ မဟုတ်ပါဘူးနော်. ပုလုကွေးလေးရဲ့ခံယူချက် နောက်ဆုံးမှာ ပြောထားတယ်နော်။ ပုလုကွေးလေး ကို စိတ်မဆိုးကြပါနဲ့။ အဲ ညီငယ်ကျားလေး ပြောသလို ခိုင်မြဲတဲ့ သစ္စာဟာလဲ အရေးကြီး ဆုံးပေါ့နော်။
အော်.... ကိုပုတောင် စဉ်းစားနေပြီကိုး လုပ်ဗျာ
အရေးအကြီး ဆုံးလို့ ပုလုကွေးလေး ထင်တာကတော့ တစ်ဦး နဲ့တစ်ဦးနားလည်မှုရှိရှိနဲ့ မေတ္တာထား နိုင်ဖို့ ၊ ကြင်နာမှု ရှိဖို့က အဓိကပါလေ။
ကို အပြည့်အဝ ထောက်ခံပါတယ်--
သားကတော့ ဒီလိုပဲ ကလော်စားလိုက်တာပဲ..
သျှီ ဆိုတဲ့ သီချင်းလေး သတိရမိသား .. ဘာတဲ့
"မာစီဒီးစ် ဘင့်ဇ်" ဆိုတာလေ..
ပုလုကွေးက မာစီဒီးစ် ကျ ဘာလို့ ထည့်မရွေးတာလဲဟင်